မြန်မာအစိုးရထံမှ ဒေါ်လာ ၄၂ သန်းကျော် ရရှိခဲ့ဟု Facebook. CEO အဖွဲ့ဝင်ပြောကြား – ၀ီရသူ
မြန်မာအစိုးရထံမှ ဒေါ်လာ ၄၂ သန်းကျော် ရရှိခဲ့ဟု Facebook. CEO အဖွဲ့ဝင်ပြောကြား
အတိုက်အခံ အင်အားစု Page / Group
အပါအဝင် ပုဂ္ဂလိက အကောင့်တွေကို
ဒေါ်လာ ၄၂ သန်းကျော် ရရှိခဲ့ဟု Facebook. CEO အဖွဲ့ဝင်ပြောကြား
မြန်မာအစိုးရ အား Facebook ပေါ်မှာ ဝေဖန်ရေးသား ခဲ့တဲ့ အတိုက်အခံ အင်အားစုတွေ ရဲ့
Page /Group နဲ့ ပုဂ္ဂလိက အကောင့်တွေကို ဖျက်ချပေးခဲ့သည့် အတွက် မြန်မာအစိုးရထံမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၂ သန်းကျော်ကို Fccebook ကုမ္ပဏီကရရှိ
ခဲ့တယ်လို့ Facebook ကုမ္ပဏီ CEO အဖွဲ့ဝင် တောင်အာဖရိက တာဝန်ခံ မစ္စတာ အန်တိနီယို ဂလင်းနာဝါရိုက်စ်က ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ် ။
မစ္စတာ အန်တိုနီယိုဂလင်းနာဝါ ရဲ့ပြောကြားချက်အရ မြန်မာအစိုးရ အနေနဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ခန့်မှ စတင်ပြီး မြန်မာအစိုးရက Facebook ကုမ္ပဏီ ထံချဉ်းကပ်ဆက်သွယ်ခဲ့ကြောင်း ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာတော့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ မြန်မာအစိုးရရဲ့ဒီမိုကရေစီ လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ ဆန်ကျင် နေတဲ့အဖွဲအစည်း များနဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ Facebook သုံးစွဲ မှုတွေကို စောင့်ကြည့်ပေးဖို့ နဲ့ အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်ကုန်ကျမယ်စရိတ်စက တွေကိုမြန်မာအစိုးရက ကျခံပေးမယ် လို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည့်အပြင် ဖြစ်နိုင်ပါက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအဆင်ပြေ စေရန် Facebook ကုမ္ပဏီမှာ မြန်မာဝန်ထမ်းတွေ ခနိ့အပ်ပေးဖို့တောင်ဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် ။
အဲ့ဒီကာလ နောက်ပိုင်းမှာ တော့ Facebook ကုမ္ပဏီနဲ့မြန်မာအစိုးရ အကြားနားလည်မှု များရှိခဲ့ပြီး မြန်မာအစိုးရ ရဲ့ အတိုက်အခံအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ တိုင်းရင်းသား ပိုင် Facebook page တွေ Group တွေနဲ့ ပုဂ္ဂလိက တစ်ဦးခြင်းပိုင်အကောင့်တွေကို မြန်မာအစိုးရဲ့ လိုအပ်ချက်အရ ဖျက်ချပေးခဲ့ရကြောင်းနဲ့ ဝန်ဆောင်ခအဖြစ် မြန်မာအစိုးရက Facebook ကုမ္ပဏီ ဆီကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၂ သန်းကျော်ပေးဆောင်ခဲ့ကြောင်း နောက်ဆုံးအနေ နှင့် ပြီးခဲ့သည့် ရက်အနည်းငယ်က မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်တွင်း ပြည်ပ မှ သုံးစွဲနေတဲ့ Facebook Page /Group နဲ့
အကောင့်ပေါင်း ၁၁၀ ကျော်ကို ဖြုတ်ချပေးခဲ့
တယ်လို့ ထည့်သွင်းပြောကြား ခဲ့သည် ။
မွနျမာအစိုးရထံမှ ဒျေါလာ ၄၂ သနျးကြျော ရရှိခဲ့ဟု Facebook. CEO အဖှဲ့ဝငျပွောကွား
အတိုကျအခံ အငျအားစု Page / Group
အပါအဝငျ ပုဂ်ဂလိက အကောငျ့တှကေို
ဒျေါလာ ၄၂ သနျးကြျော ရရှိခဲ့ဟု Facebook. CEO အဖှဲ့ဝငျပွောကွား
မွနျမာအစိုးရ အား Facebook ပျေါမှာ ဝဖေနျရေးသား ခဲ့တဲ့ အတိုကျအခံ အငျအားစုတှေ ရဲ့
Page /Group နဲ့ ပုဂ်ဂလိက အကောငျ့တှကေို ဖကျြခပြေးခဲ့သညျ့ အတှကျ မွနျမာအစိုးရထံမှ အမရေိကနျဒျေါလာ ၄၂ သနျးကြျောကို Fccebook ကုမ်ပဏီကရရှိ
ခဲ့တယျလို့ Facebook ကုမ်ပဏီ CEO အဖှဲ့ဝငျ တောငျအာဖရိက တာဝနျခံ မစ်စတာ အနျတိနီယို ဂလငျးနာဝါရိုကျဈက ထုတျဖျောပွောကွားလိုကျပါတယျ ။
မစ်စတာ အနျတိုနီယိုဂလငျးနာဝါ ရဲ့ပွောကွားခကျြအရ မွနျမာအစိုးရ အနနေဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှဈ ဇူလိုငျလ ခနျ့မှ စတငျပွီး မွနျမာအစိုးရက Facebook ကုမ်ပဏီ ထံခဉျြးကပျဆကျသှယျခဲ့ကွောငျး ၂၀၁၇ ခုနှဈမှာတော့
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျဦးဆောငျတဲ့ မွနျမာအစိုးရရဲ့ဒီမိုကရစေီ လုပျငနျးစဉျတှနေဲ့ ဆနျကငျြ နတေဲ့အဖှဲအစညျး မြားနဲ့ ၎င်းငျးတို့ရဲ့ Facebook သုံးစှဲ မှုတှကေို စောငျ့ကွညျ့ပေးဖို့ နဲ့ အဲ့ဒီလိုဆောငျရှကျပေးတဲ့အတှကျကုနျကမြယျစရိတျစက တှကေိုမွနျမာအစိုးရက ကခြံပေးမယျ လို့ ကမျးလှမျးခဲ့သညျ့အပွငျ ဖွဈနိုငျပါက ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြားအဆငျပွေ စရေနျ Facebook ကုမ်ပဏီမှာ မွနျမာဝနျထမျးတှေ ခနိ့အပျပေးဖို့တောငျဆိုခဲ့တယျလို့ဆိုပါတယျ ။
အဲ့ဒီကာလ နောကျပိုငျးမှာ တော့ Facebook ကုမ်ပဏီနဲ့မွနျမာအစိုးရ အကွားနားလညျမှု မြားရှိခဲ့ပွီး မွနျမာအစိုးရ ရဲ့ အတိုကျအခံအဖှဲ့အစညျးမြားနဲ့ လကျနကျကိုငျအဖှဲ့တှေ တိုငျးရငျးသား ပိုငျ Facebook page တှေ Group တှနေဲ့ ပုဂ်ဂလိက တဈဦးခွငျးပိုငျအကောငျ့တှကေို မွနျမာအစိုးရဲ့ လိုအပျခကျြအရ ဖကျြခပြေးခဲ့ရကွောငျးနဲ့ ဝနျဆောငျခအဖွဈ မွနျမာအစိုးရက Facebook ကုမ်ပဏီ ဆီကို အမရေိကနျဒျေါလာ ၄၂ သနျးကြျောပေးဆောငျခဲ့ကွောငျး နောကျဆုံးအနေ နှငျ့ ပွီးခဲ့သညျ့ ရကျအနညျးငယျက မွနျမာနိုငျငံ ပွညျတှငျး ပွညျပ မှ သုံးစှဲနတေဲ့ Facebook Page /Group နဲ့
အကောငျ့ပေါငျး ၁၁၀ ကြျောကို ဖွုတျခပြေးခဲ့
တယျလို့ ထညျ့သှငျးပွောကွား ခဲ့သညျ ။
တစ်သက်စာသြဝါဒ (၂) “စကားကြီး ခြောက်ခွန်း”
“ဘဝအောင်မြင်ရေး ငါးပါး တရားတော်”
မုဒိတာရပ်ဝန်း (မန်း မဟော်သဓာအလှူတော် အမှတ်စဉ်-၉၆)